एक्लो हिड्नेहरुको कथा ~ Indirasite
एक्लो हिड्नेहरुको कथा
3:49:00 PM Indirasite.com
जीवन एक्लो होस् या त कसैको साथमा होस् जीवन जिउनु सिक्नु पर्छ, जीवन रम्नु जान्नु पर्छ अनि त मज्जा छ जिउनुभित्र। पिडा पनि छन् , खुसि पनि छन् यसैको साथमा मिठो मुस्कान फिस्व निकाल्ने हो अघि बढ्ने हो, अनि त रमाइलो छ त जीवन।
हो जीवन कसैले एक्लै जिएका छन् यहाँ त कसैले कसैको साथमा बाधिएर पारिवारिक जीवन जिएका छन्। दुवै प्रकारका जीवनमा आ आफ्नै प्रकारका खुसिहरु छन्, पीडाहरू छन्, भोगाइहरु छन्। कसैको नजरमा एक्लो
जीवन आनन्द छ त कसैको नजरमा पारिवारिक जीवनभित्रको मज्जा अर्कै छ। जे होस् आज मैले यहाँ एक्लो हिड्नेहरुको कथा पस्किन लागेकी छु।
हुन त एक्लो जीवन जिउने महिला या त पुरुष दुवै हुन्छन्, एउटा महिला भएकी नाताले मेरो संगतमा भने उनै महिलाहरू छन् जो जीवनमा साथ बिना नै जीवन चलाइरहेका छन्। जब जब उनीहरु संग भलाकुसारी गर्छु तब तब उनीहरुको भावना अनि आफ्नो भावाना उस्तै उस्तै लाग्छ। महिलाको पीडाहरू उस्तै उस्तै हुन्छन् त्यसैले त हामी संधै कोमल हुन्छौ, संधै शान्त हुन्छौ, तर कुनै समयमा हामी यति कठोर पनि हुन्छौ कि हामीलाई जुनसुकै तुफानले पनि छेक्न सक्दैन, आधीले पनि रोक्न सक्दैन अनि जुनसुकै बाधा अट्चन किन नहोस हामी हाम्रो गन्तब्यको लागि निरन्तररुपमा आफ्नो पाइला चालिरह्नछौ।
हामीले सानो हुँदा देखि नै सुनेर आएको एउटा साझा कुरो थियो, " तिमी छोरीहरु अर्काको घर जाने जात, भोलि अर्काको घर गएर अरुलाई रिझाउनु पर्छ, त्यसैले काम गर्दा पनि बिस्तारै गर्नु ,हल्ला नानिकल्ल्नु, हिड्दा पनि बिस्तारै हिड्नु तबमात्र सबैले मन पराउछन् "। सम्झिंदा पनि अचम्म लाग्छ, किन छोरीको रगत र छोरामा हुने रगत एकै हुन् भनेर सोचेनन् हाम्रो बाबा आमाहरुले अनि हाम्रो समाजले । छोरी पनि आफ्नै सन्तान हुन् भनेर किन सोचेनन् उनीहरुले।छोरी भएर जन्मनुमा महिलाको के दोष थियो ताकि अरुलाई कसरी खुसि राख्ने भन्ने कुरो मात्र सोच्नु पर्ने ? किन छोरीले चाही मैले कसरी प्रग्रति गरु, या त परिवार, समाज र रास्ट्रको लागि नै केहि गर्न सक्छु भन्ने विश्वास भन्दा अलग कसरी अर्काको परिवार सम्हाल्ने भन्ने मात्रै सोच्नु पर्ने ? छोरीलाई पनि पढाउनु पर्छ, ज्ञानी बनाउनु पर्छ भन्ने बाबा आमाको मान्यता भए पनि हाम्रो समाजको हेर्ने आखाहरू कहिले बदलिएन। छोरा रातको १२ बजे घर आउदा किन ढिलो भयो भनेर प्रश्न मात्र गर्ने परिवारले छोरी कतै ढिलो घर आइ भने इज्जत फाल्लिस है भनेर औला उठाउने प्रचलन अहिले सम्म कसैको मानसिकताबाट हट्न सकेको छैन।
प्रसङ्ग एक्लो जिन्दगीको। हो एक्लै जिउनुको मजा आफै संग छ। जीवन आफुले भने जस्तै जिउनु पाएको छ, आफुले भने जस्तै खेल्न पाएको छ तर कहिलेकाही एक्लो महसुस हुन्छ, कहिलेकाही आफुले भने जस्तै, आफुले सोचे जस्तै एउटा असल जीवन साथि भैदिए ? आहा जिउनुको अर्थ बद्लिन्थ्यो होला हगि ? प्रकृतिले दिएको नियम हो यो, महिला र पुरुषबीचको आकर्षण, अनि एक अर्काको साथले पूर्ण हुने जिन्दगि। कसको चाह हुन्न, आफुलाई माया गर्ने एउटा साथी जीवनमा होस्, कसको मन हुन्न कि, साथमा कल्कलाउदा लालाबलाहरु हुन्। हो सबैको चाहना हुन्छ जीवन पूर्ण बनाउने, रंगिन बनाउने तर सबैको चाहना हुँदैमा सबैको चाहना कहाँ पुरा हुन्छन् र ? किनकी यहाँ त महिलालाइ प्रयोगको साधन बनाउने दानबहरु छन् जो महिलालाई कठपुतली जस्तै आफ्नो चाहना अनुसार प्रयोग गर्न चाहन्छन्। हो यस्तै कारणले कैयन एक्लै हिड्न बाध्य छन्।
मैले पनि आफनै जीवनले भोगेका केही तिता मिठा पलहरु अनि एक्लो जीवन जिउनेका भावनाहरु धेरै मिल्दा जुल्दा देखेको छु। जब म सानो थिए त्यो समय देखि नै मलाई महिला र पुरुषबिचको विभेद, सामाजिक संरचना देखि बिद्रोह जागेर आउथ्यो। तर जब मैले केटा मान्छे हरु संग संगत गर्दै गए उनीहरु धेरै परिवर्तित भएको महसुस गरे । त्यसैले लाग्थ्यो, समयले मान्छेलाइ परिवर्तन गर्दो रहेछ। त्यसैले अहिलेको शिक्षित पुरुषहरू कम्तिमा हाम्रा अघिल्ला पुस्ता भन्दा धेरै बुझ्ने भएका रहेछन्। उनीहरु महिलालाइ सम्मान गर्छन्, उनीहरुको भावनाको कदर गर्छन्। हो मलाई एक यस्तै जीवनसाथीको खाँचो थियो अनि मैले जसलाई आफ्नो साथी सम्झे उसमा उनै गुणहरु रहेको पाए ।
जीवन जिउदै जाँदा समय बदलियो, आबश्यकता बदलियो तर मान्छेको सोच बदलिन अझै बाकि रहेछ । जीवनलाई अघि बढाउदै जाँदा सजिलो भन्दा अप्ठ्यारा पाटाहरु धेरै हुँदा रहेछन् तर तिनै अप्ठ्यारा हरेक पलहरुले नै जीवनमा नयाँ नयाँ शिक्षा सिकाइरहेका हुन्छन्। मेरो श्रीमान एस्तो होस्, उस्तो होस्, मलाई माया गरोस, मैले भनेको सुनोस, आदि इत्यादी सबै महिलाका चाहनाहरु हुन् तर चाहना भन्दा भोगाइ धेरै अलग हुँदो रहेछ, यथार्त धेरै फरक हुँदो रहेछ। तर कसैले कसैलाई दबाउदा दबिने कमजोर कुनै पनि महिला छैनन अब। हामी त अहिले यस्तो समयमा आइपुगेका छौ कि हामी एक्लै पनि खुल्ला संसारमा पुरुसबिनाको जीवन पनि एक्लै सयर गर्न सक्छौ, रमाउन सक्छौ, खुसि हुन् सक्छौ।
अहिले एक्लै हिडिरहेको साथीहरु अरुको परिवार, अरुको सम्बन्ध देखेर नै आफु एक्लो हिड्न चाहेका हुन्, यो उनीहरुको मनको चाह अबश्य होइन । वास्तबमा आफुले कल्पना गरेको संसार अनि मान्छेले वास्तविक जीवनमा भएको यथार्थ देख्दा जो कोहीलाई पनि यस्तै सोचाई आउनु स्वाभाविक हो। तर जब कुनै पनि परिवार र समाजलाइ अगि बढाउनुको लागि जिम्मेवार पक्ष महिला र पुरुष दुबैले बराबरी जिम्मेवार बहन गर्दैन्न तबसम्म हामी समानताको कल्पना गर्न सक्दैनौ । पुरुषको खोक्रो घमण्ड र म पुरुष हु, म संग शारीरिक शक्ति ज्यादै छ अर्थात् महिलाको भूमिका एउटा परिवारमा जहिले पनि पुरुषको भन्दा गौण रहनु पर्छ भन्ने भावनाको अन्त्य हुन्दैन तबसम्म न त सुसस्क्रित मानब जीवनको अर्थ सम्भब छ न त कुनै एउटा सुसंजित समाज र बिस्वको नै।